Avelao ny fahafahanao manohana "vokatra tsara kokoa"? | Avy amin'ny Linux
Avelao ny fahafahanao manohana "vokatra tsara kokoa"?
Nano | | Fitsinjarana, GNU / Linux, hafa
Taloha lasa izay, tsy tadidiko hoe taiza aho, namaky lahatsoratra iray nataon'ny mpampiasa Archlinux teo aloha, izay nilaza fa hiala amin'ny GNU / Linux izy taorian'ny 5 taona nampiasan'i Mac satria mila sehatra tsara kokoa hiara-miasa izy.
Araka ny tsirairay amin'ireo rafitra fiasa telo ireo dia manana asa manokana ao anatin'ny tontolon'ny informatika, izay mety ho:
<° Windows: milalao.
<° Linux: hianatra (ary hianatra ihany).
<° Mac: ho an'ny fampiasana sy asa matihanina.
Ankehitriny, avy eo dia nanazava izy fa na dia manana fahafaha-manao goavana aza ny GNU / Linux, dia misy fatiantoka maromaro kosa mametraka izany ao ambadiky ny mpanohitra azy roa. Araka ny voalazan'ny tonian-dahatsoratra (manitrikitrika aho fa tsy tadidiko na tsy azoko ilay lahatsoratra) ao amin'ny GNU / Linux be loatra ny fahalalahana sy ny fizarazaran-toerana, be loatra ny disko ary tsy nila izany fahalalahana izany ny mpampiasa satria tsy fantany izay hatao aminy ary noho izany dia tsy nampiasain'izy ireo izany.
Notazominy izany; Tsara kokoa ny manana rafitra henjana sy mihidy izay manolotra anao ny zavatra rehetra ilainao hiasa ary tsy hamela anao hanao izay tadiavinao aminy hatrizay, raha ny tena izy, tsy hanao zavatra mihoatra ny mahazatra ianao ... Tsara kokoa ny manana rafitra natambatra sy afovoany ary io famoahana io fahalalahana io dia nanolotra tombony sy tombony lehibe kokoa izay tsy nataon'ny GNU / Linux.
Hoy izy io, amin'ny fanaovan-teny hafa satria tsy tadidiko ny soratra:
"Tsy liana amin'ny fahalalahana ny olona, ​​maro no vonona ny hahafoy azy io hahazoana vokatra kalitao matihanina, izany no antony tsy mahaliana azy ireo amin'ny GNU / Linux, satria tsy mila fahalalahana be loatra izy ireo"
Avy eo dia nilaza izy fa ny marina dia ny safidy tsara indrindra ho an'ny GNU / Linux dia ny fampivondronana ny zava-drehetra ao anaty rafitra tokana sy goavana izay afaka mifaninana amin'ireo hafa hahazoana fizarana tsena lehibe kokoa, fa tsara kokoa ny mametra ny tena amin'ny haavon'ny fahalalahana. ary manana rafitra mitambatra hahafahana mahazo vokatra tsara kokoa ...
Ok, tsara fa manana ny baolina izy hiteny ireo zavatra nipoitra avy tamin'ny filaharana, saingy manana izany koa aho ary tena tsy mankasitraka an'io voalaza rehetra etsy ambony io aho.
Marihina fa tsy Taliban rindrambaiko maimaimpoana aho na zavatra hafa toa izany, saingy manana famandrihana amin'ity rafitra ity aho.
Voalohany indrindra dia tsy maintsy ataoko mazava tsara fa ny miasa sy ny mamokatra, ny rafitra tena marina sy mivaingana dia ny Linux (tsy nasiako intsony ny GNU satria teknika io).
Tsy haiko hoe firy eto no mahatadidy fa ny rafitra tsara indrindra ho an'ny mpizara ary ilay manana tarehimarika mavesatra indrindra dia ny Linux, izay nihoarany ny Windows Server tamin'ny sisin-tany mihoapampana ary toerana tsy ahasahian'i MacOS miseho miaraka amin'ny "fampiasa sy fitoniana" be mpitia aza. (apetaho eo akaikin'i Debian ary lazao ahy hoe iza no milamina kokoa).
Faharoa, raha afaka mampiasa Windows na MacOS amin'ny sehatry ny asa ny orinasa iray dia tsy maintsy miala amin'ny ampondra izy araka ny lazainay ao Venezoela, satria ny fahazoan-dàlana Windows dia tsy ara-toekarena na azo ampiharina satria ny kinova "Starter" dia mitovy amin'ny "Professional" fotsiny. noho ny fahaiza-manao «capped» ary miaraka amin'ireo entana tsy dia napetraka mialoha. Tsotra izany Ary mbola ratsy kokoa aza, raha te hampiasa MacOS amin'ny famokarana amin'ny orinasa ianao dia handalo ny tafon-trano satria tsy mila mividy ny rafitra fotsiny ianao fa ny masinina manontolo ho an'ny rafitra, izay, farafaharatsiny mandany ny masonao amin'ny tarehy sy virijina roa hatao sorona. Etsy ankilany, ny fampifanarahana distro amin'ny tontolon'ny asa iray manontolo dia tsy handoa vola ho anao fotsiny ilay teknisianina manam-pahaizana, izay amin'ny fotoana maharitra dia avo folo heny noho ny teo aloha rehetra.
Amin'ny haavon'ny fisoratana anarana amin'ny birao, satria tsy mila miresaka an'io lohahevitra io akory aho satria fantatsika fa afaka mamaly ny fitakian'ny birao amin'ny fiadanan-tsaina tanteraka ny LibreOffice, ny hany maharatsy azy dia ny tsy fitovizany amin'ny endrika fitondra mandry, miala tsiny, format .doc na .docx fananana. .
Amin'ny haavon'ny endrika sary dia mila mifaninana amin'ny fomba mahaliana ihany koa izy, na dia tsy dia misy zavatra maro aza ao amin'io lafiny io, fa ho an'ny famolavolana tranonkala, ny endrika 3D, ny sary ary ny sary dia ampy ny teboka tiany.
Ho an'ny tontolo fandaharana? Tsy lazaina intsony, Linux no mpanjaka noho io karazan-javatra io. Programmer iray no milaza aminao.
Ka noho izany dia heveriko fa mandraka ankehitriny ny "rafitra tsirairay dia tsara amin'ny zavatra iray ihany" dia somary mifandraika ihany ary toy ny ady hevitra no misy fototra iorenan'ny taratasy.
Fa raha nisy zavatra nanohina ny baoliko dia io indrindra no ampahany noresahina tamin'ny "famoahana fahalalahana hahazoana vokatra tsara kokoa". # !! # $ ”& $ (Q / #” Tsy maintsy biby ianao raha milaza izany prank izany! Efa mba nanontany tena ve ianao hoe firy amin'ireo izay mividy Mac, manana lisansa Windows (na hack ity iray ity) no tena mahalala izany Inona no atao hoe fahalalahana ary inona no azon'izy ireo alaina ao amin'ny rafitra fiasa? Tsy haiko raha manazava ny tenako aho, fa raha ny tena izy, ny ankamaroan'ireo mpampiasa ireo rafitra miasa ireo dia manana hevitra mihitsy ve fa fahalalahana ny sahy milaza fa mandà an-tsitrapo izany izy ireo vokatra tsara kokoa? Manosika ahy ve izany rehefa miteny zavatra toy izany izy ireo; voalohany indrindra ny ankamaroan'ny olona dia feno paradigma momba ny Linux ary mieritreritra izy ireo fa ho an'ny mpijirika efa za-draharaha ihany io ary ilay terminal dia biby mandrehitra afo sy asidra hydrochloric mankany ny olona rehetra izay sahy manindry azy.
Efa nolazaiko foana io, ampiasain'ny olona ireo rafitra roa ireo satria izy ireo no manana dokambarotra betsaka indrindra, satria samy niandraikitra ny fanipazana fako izy ireo ary satria samy naneho hevitra toy ny "Linux dia homamiadana" , ary koa fa tsy tena izy ireo no aleon'izy ireo manolo ny fahafahany amin'ny vokatra tsara, fa tsy fantatr'izy ireo fa ny kôkômbra dia fahalalahana… Ah! Azo antoka, tsy manadino aho, soroy ny fahafahanao ho an'ny efijery manga sy viriosy na aiza na aiza? Azo antoka fa manao zavatra tsara ry zareo ...
Farany nefa tsy kely indrindra… Atambaro ny Linux rehetra hahafahana mifaninana amin'ny tsena iray? Fa iza kosa no nilaza fa mifaninana amin'ny taha ambony amin'ny tsena isika? Eny, misy disto toa an'i Ubuntu izay manao izany, saingy manome fahalalahana izay tsy hanonofinofin'ireo rafitra roa hafa hatolotra akory izy ireo, atolotra azy ireo maimaim-poana ary manome vokatra avo lenta kokoa, na farafaharatsiny mitovy kalitao arosony.
Ity "Mampiray" Linux ity dia ho toy ny mandrovitra ny ain'ny zanak'olombelona, ​​tsy azo atao izany, io no votoatin'ny tontolontsika, ny fahalalahana tsy ny hisafidy rafitra iray ihany, fa ny tontolo iainana, ny fampiharana, ny fikirakirana ary ny maro hafa. ny zavatra ... Tsy azo atao tsotra izao, tsy azony atao, ny mpampiasa Arch dia tsy te handao ny Arch, ny iray avy amin'i Debian na Ubuntu koa ... Ry tompokolahy, zavatra tsy misy dikany ny mieritreritra azy ity, mety ho tonga tena marina manohitra ny ady ataontsika, ny hevitra dia tsy vitan'ny fanoherana fa tsy lojika tanteraka.
Raha fintinina, hoy ity mpanoratra ity dia tsy misy toerana na aiza na aiza, manaja ny heviny aho fa tsy afaka mizara izany. Ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Avelao ny fahafahanao manohana "vokatra tsara kokoa"?
Hihaona tsy ho ela Linux
Izay!, Misaotra anao !.
Louzan dia hoy izy:
Andao zaraina roa ny lahatsoratrao. 1 izay ilazanao hevitra momba ny lahatsoratra misy ilay karazana, ary 2 izay ilazanao ny hevitrao. Raha namaky ny 1 aho dia mieritreritra izay apetrakao amin'ny 2 ianao.
Na izany na tsy izany dia marina ny filazan'ilay bandy fa mpampiasa sy bilaogy sasany (ny sasany ihany) dia natokana hidera ny safidiny sy hifanakalo hevitra amin'ny hafa, sns. Tena mitsikera ny Ubuntu fotsiny aho amin'ny fanapahan-keviny farany, na dia izany aza ny fanambarana rehetra ho ahy dia lafatra.
En ity lohahevitra ity Avy amin'ny forum an'ny vondrom-piarahamonina Hispanika LM (lohahevitra diso io araka ny ahitanao azy) misy koa ny firesahana momba an'io raharaha io, tsy vao sambany io ary tsy io koa no farany henoko momba an'io.
Valio i Louzán
Ny masonkarena nataoko dia ny, ny ary ny hampiasan'ny tsirairay ny rafitra mifanaraka amin'izy ireo, ny iray izay toa mahazo aina indrindra, ilay mamaha ny olana tadiavin'izy ireo hamaha, satria io no fahalalahana misafidy, mazava ho azy, ny fanapahan-kevitra malalaka. afaka mitarika fandoavam-bola izy ireo ary tsy afaka manao "izay tianao" amin'ny vokatra novidinao. Ho an'ny sasany milaza fa ny rafitra iray dia tsara kokoa noho ny hafa, dia ny famahana ny olana ho azy ireo fotsiny izany. Tsy zakako ireo fanehoan-kevitra ireo avy amin'ny sasany izay milaza fa raha tsy mandeha ity rafitra ity satria tsy manao an'io na mihoatra noho izay nefa tsy hitako akory aloha. Amin'ny tranga manokana, tiako be i Debian ka tsy afaka mametraka fizarana hafa intsony aho. Na inona na inona lazain'izy ireo dia mbola ao amin'ny Linux aho.
Ny fieritreretana fotsiny ny lahatsoratra novakianao, fa misy olona mandao an'i Archlinux dia tsy midika afa-tsy zavatra iray vaoavao na vao manomboka ary reraky ny mianatra, vao nanomboka tamin'ny tontolon'ny Linux aho, ary eo amin'ny linuxmint 11 aho, saingy, amin'ny maha Mamaky aho raha tena te hahalala ny tena linux mankany amin'ny Archlinux ianao ary mandre zava-mahatalanjona momba an'ity distro ity fotsiny, dia ianaro.
elbuengeorge dia hoy izy:
Izaho manokana, ary raha te-hanafintohina aho dia tsy maintsy milaza aho fa ny fanomanana sy ny famoahana lahatsoratra miady hevitra momba ny hevitry ny mpampiasa Arch-Linux teo aloha dia mampalahelo ahy farafaharatsiny.
Ny tiako holazaina dia "tsy misy fanafintohinana." Salama.
Aetanes dia hoy izy:
Hatramin'ny 2008 (nanomboka tamin'ny ubunto 8.04) aho dia nampiasa distros marobe, na dia mijanona miaraka amin'i Debian foana aza aho mandritra ny fotoana kelikely, "tofoka" aho ary mametraka an'i Arch. Nefa nandritra izay fotoana rehetra izay dia nanana OS tsy linux hafa foana aho, booty roa sosona foana satria Na dia manana linux aza aho dia afaka manao izay tiako atao imbetsaka tsy tiako (teny manan-danja) hanaovana izany amin'ny linux, ohatra, filalaovana lalao na zavatra toa izany. Nahita olona Taliban marobe ihany koa aho, indrindra satria nividy solosaina finday izay heveriko fa tena mety amiko indrindra, Macbook pro, ary lazain'izy ireo amiko hoe "posh" na dia eo aza ny fividianana booty indroa ho an'ny fitsapana debian. Aorian'ity "traikefa manokana" ataon'ny olona ity matetika dia tsy afaka atao tanjona 100%. Ka ny an'ity OS ity dia tsara kokoa na ratsy kokoa dia toy ny loko, resaka tsiro, na dia tianao linux aza izany matetika dia noho ny etika / fitondran-tena. Tsy raharahan'ny olona ny fandehanany amin'izay tiany na heverin'ny olon-kafa ho "tiany". Ary na dia tsy maintsy lazaina aza fa iray amin'ireo mieritreritra aho fa tsy tokony ho «hacker» hampiasa Linux, raha tsy izany, ao an-tranoko dia mpijirika eraky ny rehetra izy ireo hoy ny fahasahisàna haha. Milaza koa aho fa mianatra mianatra. Informatica sy ny tiako dia pro-linux. Raha fintinina, SO toa ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana ny resaka tsiro, sa zavatra ratsy tiako ny mulattos? Haha.
Valiny amin'i Aetanes
Miala tsiny amin'ny soratra ratsy soratako amin'ny finday ...
Nozaraiko ny toerana misy anao nano, ary mahamenatra nefa tsy omeko ozona izay ampiasain'ny olona, ​​raha mampiasa rindrambaiko maimaim-poana izy ireo, raha tsy izany dia tsy azo terena ho malalaka kokoa izy ireo.
Maxwell dia hoy izy:
Mety hitovy amin'ny Ren fantatro ihany ve ianao? Raha izany, tsy mbola nahita anao tao amin'ny crawl.akrasiac.org efa ela aho, afaka nandalo taorian'ny Orc Mines, nandroso be ilay moaniko minotaur, angamba amin'ny iray amin'ireo dia afaka mandresy ny mpamosavy misy poizina ihany amin'ny farany.
Valiny tamin'i Maxwell
Tena nieritreritra an'izany aho.
Linux dia manana ny maha izy azy ao anatin'ny sokajin'ny asa: Programmer, Designer, Office, sns.
Ny ratsy, tsy manana an'io anaram-boninahitra na laza io toy ny Windows na Mac OS:
"Amin'ny famolavolana, raha Mac OS tsara kokoa"
Ny fomba fahitako:
Windows na malaza fotsiny satria tsy fantany.
Tena lalao video ihany
Mac OS ihany no manome anao volafotsy, volafotsy ary volafotsy. TSY AZO HAHITA Fampiasana.
Linux, mila ao amin'ny sokajy Lalao Video ihany izy io.
Raha mifantoka amin'ny lohahevitra isika: ny Windows dia ampiasaina indrindra amin'ny filalaovana (na talohan'izay dia toy izany), Mac-OS ho an'ny asa misy lanjany lehibe na ho an'ireo mpampiasa manome lanja ny famolavolana, ary ny Linux ho an'ny manam-pahaizana momba ny solosaina. Amin'izao fotoana izao, Linux dia afaka manolo ny rafitra fiasa rehetra ary manarona ny filan'ny mpampiasa antonony rehetra.
Amin'ny fampiraisana: Betsaka ny fizarana ary ny fahasamihafana dia toa tsy olana hamahana. Fa raha te-hahita normalization ny tontolon'ny GNU / Linux aho, dia miaraha manaiky ny torolàlana sy ny fenitra izay manamora ny fivelaran'ny tetikasa vaovao nefa tsy mamerina ny kodiarana isan'andro isan'andro. Ohatra iray amin'izany ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fonosana, tsara ny fahalalahana fa rehefa manimba tetik'asa hafa dia mandoto.
Windows no tena ampiasaina amin'ny lalao
Fahadisoana izany, any amin'ny toerana onenako no ampiasain'izy ireo manomboka amin'ny governemanta ka hatrany amin'ny trano fa tsy hilalaovana lalao marina.
Tsia, izy io dia cliché ihany. Ny hevitra izay ananan'ny olon'ny rafitra tsirairay fotsiny no lazaiko. Ny diso dia tsy misy ifandraisany amin'izany, jereo ny rakibolana. Toy ny hoe tsy fantatro fa ampiasaina amin'ny zavatra hafa ny Windows ... ny zava-dehibe momba ny hevitro dia ilay zavatra hafa moscoso.
Fantatro tsara ny atao hoe lesoka ary ny expression dia ampiasaina tsara amin'ity tranga ity.
Nijanona teo aho satria tsy mifanaraka amin'ny fanambarana toy izany amin'ny fampielezana Windóusian.
Ka raha izany, lazao amiko hoe aiza ny fisainana tsy marina toa marina na ny famitahana satria tsy hitako io fehezanteny io. Raha be indrindra dia azonao atao ny milaza fa lainga io (izay tsy mitovy na dia mitovy dika amin'ny toe-javatra hafa aza izy ireo). Indraindray ianao dia mikorontana fotsiny mba hampisehoana ny fivavianao. Famerenana:
Vakio tsara kokoa ...
Zava-dehibe ny fehintsoratra voalohany.
Ary lesoka izany satria tsy misy adihevitra marim-pototra momba ny fanambarana toy izany, aiza no ahitanao fa ny varavarankely dia ampiasaina hilalao fotsiny? Manana angon-drakitra sarotra manohana an'io ve ianao sa ny fahitanao ny ampahany fotsiny amin'ilay lohahevitra sa tsia avy amin'ny saina tsotra?
Heveriko fa tsy azonao ny zavatra lazainy ao amin'io andalana io satria miombon-kevitra amiko izy. Inona no ifandraisan'izany amin'ny saziko. Nefa jereo, hampianatra teny iray hafa ianao, antsoina hoe fanitsakitsaham-bady izany. Manala baraka ny hafatro ianao amin'ny fividianana sombin-javatra iray izay ivelan'ny toe-javatra mahatonga ahy hahatsapa ho ratsy. Izay mamaky ny hafatra manontolo dia hahita "Raha mifantoka amin'ny lohahevitra izahay:" eo alohan'io andianteny io izay mampihomehy anao. Ampy izay ny fahafantarana fa ny manaraka dia cliché. Avy eo tsy misy fitaka, tsy misy fanjohian-kevitra diso toa marina, ary tsy manandrana mandresy lahatra an'iza na iza miaraka amin'ilay fehezanteny kely aho. Tsy dia sarotra ny mahatakatra izany.
…. ary lesoka io lohahevitra io.
Ny fikasana fikasana bebe kokoa tsy dia zavatra hafa, fikarakarana bebe kokoa rehefa manoratra 😉
Etsy ankilany, tsy nanova na inona na inona nolazainao aho, mainka fa ny famoahana ny hevitra ankapobeny ny fidiranao an-tsehatra, niresaka fotsiny aho ary indrindra an'io fitenenana io.
Hitako fa tsy miala amin'ny ampondra ianao, fa tsy modiko kosa, afaka mamaky ny olona (na dia miafina hatramin'ny farany aza ny sasany).
Mba hamaranako, miala tsiny amin'ireo mpampiasa sisa tamin'ny fanodikodinany ny lohahevitra, mamela ny tsy fahamarinana aho (izay fahadisoana ilainao ny fifamaliana, FANONTANIANA):
Premise 1: Manintona ny loharano misokatra.
Toerana 2: manintona ny mpiara-monina amiko.
Fehiny: "loharano misokatra" ny mpifanila vodirindrina amiko.
@moscosov, am-panajana tanteraka: Tsy azonao ampitahàna ny Wikipedia (izay misy olona manana na tsy manana fahalalana mandray anjara) amin'ny RAE.
Tsy loharano tena azo antoka ny Wikipedia.
Raha tsy misy ny finiavana hiady hevitra, ary miezaka ny tsy hanavakavaka araka izay tratra, dia mila milaza aho fa manaiky 100% amin'ny 103 rehefa miteny hoe: «Ny fepetra napetrako dia ny ary hampiasa ny rafitra tadiaviny ny tsirairay. toa mampahazo aina anao indrindra izany, ilay mamaha ny olana tianao hovahana… »ary 50% miaraka amin'ny mpanoratra (na iza izy na iza) ilay lahatsoratra nanelingelina an'i Nano. Azavao: miasa ao amin'ny orinasa iray misy milina roa CNC aho, milina iray ary latina, ny vidin'ny milina dia mitentina eo amin'ny antsasaky ny tapitrisa dolara. Mihazakazaka amin'ny fahaiza-manao feno, mamela ny taona ho tombony azo enina amin'ny isa izy ireo. Mora ny matematika, sa tsy izany? Ny masinina dia marika HAAS (jereo http://www..haascnc.com), izay mpitarika amin'ny indostrian'ny milina robotic. Ireo fitaovana ireo dia azo ampifandraisina amin'ny tamba-jotra eo an-toerana ary mandray mivantana ilay programa amin'ny solosain'ilay programmer, saingy hita fa tsy misy ho an'ny Windows fotsiny ny firmware misy ireo milina ireo, ary ny mpanamboatra dia mitaky ny Active Directory / Domain Controller hampidirina ao anaty tambajotra. Ny rindrambaiko miaraka amin'ireo masinina ireo, amin'ny tranga manokana eto amintsika, dia MasterCam, ary indray mandeha ihany, dia tsy misy afa-tsy amin'ny WinOS ihany. Ka, raha ny tena izy, ny lazaiko dia tsy momba ny "Fanaterana ny fahalalahanao ho an'ny efijery manga sy viriosy eny rehetra eny", fa matetika kosa dia ny fanaovana sorona ny fahafahanao hahazoana tombony ara-bola be ranony. Mahafinaritra ahy ny hevitra momba ny rindrambaiko maimaimpoana sy ny loharano misokatra, fa ny namako, eto amin'ity tontolo ity, ny axe afovoany - indrisy - dia vola, ary raha te hanana tombony an-tapitrisany aho dia tsy maintsy mampiasa vola an'arivony amin'ny antivirus sy Windows Server, tsara tongasoa
Manomboka amin'ny indostria fantatro tsara aho, saingy santionany fotsiny io. Io toe-javatra io dia averimberina farafahakeliny 85% amin'ireo mpanelanelana amin'ny orinasa lehibe fantatro, ary tsy mino aho fa hiova be ny sary ao anatin'ny dimy taona ho avy.
Fantatro akaiky ny orinasan-tsary famolavolana sary avy amina fianakaviana akaiky iray izay niasa tato amin'ny birao Fedex. Nitsidika ny asan'izy ireo imbetsaka aho ary lasa liana tamin'ny rindrambaiko sy ny fitaovana ampiasain'izy ireo. Tsy miresaka momba ny mpanonta laser mahazatra isika, miresaka momba ny mpanonta offset izay manonta amin'ny lamba, plastika, taratasy, sns. Sns Sns mifandray amin'ny tambajotra eo an-toerana avokoa. Tokony holazaiko fa tsy nahita solosaina iray mihazakazaka fizarana GNU / Linux aho. Ny telo ampahefatry ny solosaina dia solosaina PC ary ny ampahatelony sisa dia Mac avokoa. Ny rehetra dia nametraka ny fanangonana Adobe teny rehetra eny, ny Corel mandrakizay, ary ny 3D MAX na AutoCAD indraindray, indray mandeha, izay tsy misy afa-tsy amin'ny Windows na MacOS ... rojo hafa orinasa (an-tsitrapo) mankany amin'ny duo Microsoft-Apple.
"Ny rafitra tsirairay dia tsara ihany amin'ny zavatra iray" dia somary feno ihany, fa raha mino aho fa ny rafitra tsirairay dia tsara kokoa amin'ny zavatra iray, dia fanambarana marina izany.
Tsy mpandrindra tambajotra aho, saingy misy zavatra fantatro momba izany, ary raha te ho fantatra i Microdoft, dia tamin'ny DC / AD no nahazoany lahatra mafy ka hatramin'izao dia sarotra ny mandresy ny Linux amin'ny tontolon'ny asa misy mpampiasa vitsivitsy ary mitaky izany. avo lenta amin'ny fampidirana rindrambaiko / fitaovana avy amina mpamokatra manokana. Tsy ny terminal dia "biby mandrehitra afo sy asidra hydrochloric", fa maninona no atao amin'ny tsipika kaody 50 izay azonao atao amin'ny tsindry telo ????
"Raha fintinina," heveriko fa ny mpanoratra «incognito» momba ny lahatsoratra incognito dia mety tsara amin'ny ambaratonga iray. Angamba nikatona ny orony tany ivelan'ny efitrano iray izy tamin'ny 26 ° C niaraka tamin'ny lozisialy UNIX teo akaikiny, ary tsapany fa ny "asa" sy ny "indostria" dia mihoatra ny mpizara kilasy fandraharahana ihany, miaraka amin'ireo mpampiasa an'aliny sy tahiry goavambe marobe. , izay toerana anaovan'ny Linux, tanana ambany, dia tsara noho ireo mpifaninana aminy.
Tsy manana tsy fahampian'ny antony ianao, fa ny governemanta iray manontolo dia mihevitra ny hampiasa ny Free Software ho an'ny zava-misy tsotra fa ny vola lany amin'ny fampiharana izany, nefa ireo rafitra goavambe miaraka amina rindrambaiko manana dia miafara amin'ny fandaniam-bola be loatra handoavana izany ary ny vola azo zaraina tsara amin'ny olom-pirenena. na fenoy tsara kokoa ny paosin'ny mpanao politika ... Izay mety indrindra amin'izy ireo.
Ny zavatra atao dia ny Linux afaka manatanteraka lafin-javatra maro tsara, na dia mivaingana sy mitombina aza izy io dia mihena koa amin'ny lafiny hafa, saingy efa niasa imbetsaka tamin'ny tambajotra Linux 100% aho ary tsy mbola nanana olana. Raha ny marina dia nanome aretin'andoha ratsy kokoa ahy i Windows.
Efa eo amin'ny sehatry ny mpizara, tsy misy ifanakalozan-kevitra, eto Linux ary ho mpanjaka mandritra ny fotoana lava sy lava.
Famaranana: Ny fahalalahana tsy ampiasaina dia mbola tsara kokoa noho ny fetra hafa ankoatry ny tombontsoana sy ny filan'ny mpampiasa (izay mazàna ireo izay mety tsy mampiasa ambany loatra ny fahalalahana)
Bernikov dia hoy izy:
Tsy haiko hoe maninona no be ny olana amin'ny OS, tsotra ny hevitro: araraoty ny OS tsirairay, samy manana ny tombony sy ny fatiantoka entiny ny tsirairay. Ao an-tranoko dia mampiasa ny rafitra fiasa 3 aho ary mahazo ny tsara indrindra avy amin'ny tsirairay avy, tsy misy karazana sarotra, ankehitriny raha misy zavatra tokony harovana dia arovana, raha misy zavatra tokony halam-baraka dia manala baraka ary mazava ho azy fa misy tetikasa na vondrom-piarahamonina izay tohano, tohanana ianao. Tsy ny olon-drehetra no afaka mieritreritra mitovy amin'ny tadiavin'ny olona iray ary tokony hajaina izany ary avelao izy ireo hampiasa ilay OS izay tsapany fa mahazo aina indrindra. Ankehitriny dia tiako ny Linuxeros, na eo aza ny fahamaroan'ny ankamaroan'izy ireo dia "Taliban" na dia milaza aza izy ireo fa tsy digo tsara dia lazaiko izany satria tsy mamela ny tenany hovidiana na hamboarina tahaka ny mitranga ao amin'ny Windows na Apple izy ireo, ny tiako holazaina dia hoe afaka manao ireto rafitra fiasa 2 ireto "shit" maro no tadiavin'izy ireo, hofaranana foana amin'ny alàlan'ny fanaovana dokambarotra na amin'ny vokatra tsotra fotsiny ny zavatra mahafinaritra, ny tiako hahatongavana dia ny mamela ireo mpampiasa ny rafitra miasa hividy zavatra na inona na inona, fa kosa linuxeros Ny "Cigars" dia nisondrotra tsara ny fototr'ireo filozofian'izy ireo ary tsy mitsahatra ny entin'ny fitaovana na ny vola izy ireo, taratr'izy ireo izany amin'ny fahalianany kely ahazoana anjaran-tsena, tsotra ny hevitra: raha mbola manohy manao asa tsara izy ireo miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina ary manohy ny filozofianay izahay, ny sisa tsy maninona ary mieritreritra aho fa tsara izany amin'ireny fotoana ireny rehefa tsy mieritreritra afa-tsy ny raharaham-barotra ny tsirairay, na iza na iza manadala azy.
Valiny tamin'i Bernikov
Eny, eny, tsy hoe tsy liana amin'ny raharaha ara-barotra isika, satria mila mihinana daholo. Saingy ataoko ao an-tsaina foana ny vondrom-piarahamoniko ary tsy maintsy averiko aminy be dia be amin'izay nomeny ahy izany, satria ny oniversite ahy dia antsoina hoe internet ary ny lohateniko dia "rindrambaiko maimaimpoana".
Raha ny marina, ny zavatra nianarako rehetra tamin'ny siansa momba ny solosaina dia noho ny fahazoan-dàlana maimaim-poana sy ireo asa fiaraha-miasa ary ho an'ireo izay hananako ny mari-pahaizana amin'ny oniversite fa tsy ilay oniversite antonony ianarako.
Manomboka amin'ny fiheverana fa fanoherana ny paoma aho, tsy miraharaha ny fahalalahana ireo mpampiasa, raha tsy azon'ny olona akory ny tena fahalalahana .. ho azon'izy ireo ve ny fahalalahan'ny rindrambaiko?
Amin'ny farany dia toy ny zava-drehetra izy io, afaka ny rehetra, raha maimaim-poana, hampiasa ny fonja azy manokana raha tiany ary ny mac amin'ny resaka audio sy video dia sehatra iray lehibe. Ny fragmentation dia ohatra iray fotsiny amin'ny debauchery, ilay zavatra mitovy amin'ny zava-misy, mitranga ao amin'ny Linux
Ah! Azo antoka, tsy manadino aho, soraty ny fahafahanao ho an'ny efijery manga sy viriosy eny rehetra eny? Azo antoka fa mahomby izy ireo ……
Amim-pahatsorana, ho an'ilay olona izay mahazo viriosy na aiza na aiza (tsy isaky ny mandeha), atsaharo ny fitsidihana tranonkala mamoafady mampiahiahy.
Azonao omena ohatra vitsivitsy amin'ny pôrnôgrafia azo itokisana ve aho? Tsy nampiasa Windows handany vetaveta efa ela aho fa tsy hainao mihitsy :-P.
Ny tetikasa sasany dia tokony antsoina hoe rindrambaiko libertine, tsy isalasalana.
Tsia, raha adala amin'ity lehilahy ity aho .. Andao hizaha Pandev, maninona ianao no tsy manokatra bilaogy amin'ny WordPress.com antsoina hoe amowindowsdeath.wordpress.com ..?
Kamo loatra aho ka tsy mitandrina ny bilaogy iray monja: D. (Tsy vazivazy). Ny hany virus niditra tao amiko dia ilay iray izay tsy nahatonga ny tildes hiasa ho ahy ary heveriko fa avy amin'ny tranonkala vetaveta no nitsidihako xD…, raha fantatrao ny misy anao dia tsy misy zavatra hitranga aminao amin'ny fitaratra. Misy aza fitaovana toa ny WOT izay milaza aminao ny fahamendrehan'ny tranonkala rehetra.
[quote] azonao atao ve ny manome ohatra vitsivitsy amin'ny pôrnôgrafia azo antoka? Tsy nampiasa Windows handany vetaveta efa ela aho fa tsy fantatrao mihitsy [/ quote]
Tube8, xvideo… .: P (Tsy asiko xd bebe kokoa)
Tsy maintsy noho ny tranonkala vetaveta izay notsidihiko
Lazao hoe eny, izany no fiantombohan'ny lalan'ny SIDA.
Miaraka amin'i Windows dia nanana viriosy aho nefa tsy nitsidika pejy mampiahiahy na toy izany (fantatrao fa anti-maloto aho), toa an'i Blaster, Trojans (na dia tsy viriosy aza izy ireo, malware izany) na Are-gen.
Ka heveriko fa tsy ahy io
Ampiasao ny wot raha te hahalala izay pejy misy anao ianao ary mitandrema amin'ireo rakitra alainao.
Aza resena lahatra aho hisintona rakitra am-pitandremana hahahaha
Indraindray ny <º Linux dia toa "Linux avy amin'ny Windows" noho ireo marika maneho hevitra :-D. Saingy heveriko fa izany dia mampiseho fa misy ny fanakianana ny Windows.
Manantena aho fa ho azoko tsara ny fomba fanao amin'ny mampiaraka (sarotra be izany :-P)… Misaotra fa efa tsy nahomby ve ianao, sa tsy izany? Ny olon-tiako dia pôrnôgrafia Erika Lust. Hentai kokoa aho, manome aingam-panahy betsaka ny tantaran'izy ireo.
Ho an'ny hentai dia nosy hentai tsara ity, hentai an-tserasera ary tranokala hafa.
Raha mila pron, keezmovies, beeg, hardsextube..xD bebe kokoa ianao
Mandehana ary miresaka momba izany amin'ny MuyLinux, tsy eto azafady, fa ireo zavatra ireo dia tsy sitraky ny olon-drehetra
Mila mianatra tsy miraharaha ireo fanehoan-kevitra tsy mahaliana anao ianao. Raha heverinao fa manafintohina azy ireo izany dia azonao atao ny mitory izany amin'ny tompon'andraikitra amin'ny hetsika. Ny teny vetaveta sy hentai dia tsy mahatonga ny zavatra rehetra kasihan'izy ireo ho vetaveta, vazivazy izahay, ny «fahagagana» nataonao dia toa pose :-P
Mila mianatra tsy miraharaha ireo fanehoan-kevitra tsy mahaliana anao ianao
Tokony ho fantatrao fa ny hatsikana dia maharitra ao amin'ny hatramin'ny Linux ...
Aza matahotra fa tsy mandray anao matotra mihitsy aho :-P. Etsy ankilany, ny vy mahatsikaiky dia tsy mifanaraka amin'ny Internet ;-).
Haha eny, tsy mety ny manoratra, efa nanana olana kely tamin'ny elav aho noho izany
Ho avy aho ...: P (?)
yczo dia hoy izy:
Apple sy Microsoft dia manam-bola hialana amin'ny fandoavam-bola disinformation troll mba hitaomana azy ireo hiditra amin'ny rafitra fiasan'izy ireo.
Raha ny fahitako azy, ny tena ratsy indrindra dia ny paoma satria ankoatry ny lavaka sy ny marefo ary ny tsy fitovizany amin'ny lalao sy ny fampiharana hafa (raha nanapa-kevitra aho fa tsy handefa programa GNU amin'ny mac, afa-tsy ireo izay mizara manokana toa an'i darwin ( Fantatro fa satria manana intel izy ireo dia tsy ilaina izany ary azonao atao ny mametraka debian xd)), mametraka anao amin'ny ampihimamba iray manontolo ianao amin'izay tsy mila hamaha ny volavolan-dalàna raha te hankafy kely ianao.
Raha fintinina dia tsy nanao na inona na inona ho an'ny mahantra i Steve Jobs. Solosaina lafo vidy ihany no nesoriny ary tiany ho azy irery ny paoma rehetra.
Valio i yczo
Aiza ny loharano izay isehoan'ilay bandy navelan'i Arch? Te hamaky azy io aho 🙁
Etsy ankilany, mampiasa Linux matetika aho, OS tena tsara izy io saingy tokony ho kendrena sy hahay handanjalanja koa ianao ary hahafantatra hoe aiza no milomano:
- Miaraka amin'ny Hardware ankehitriny.
- Ny ankamaroan'ny lalao.
- Famolavolana sary sy fanovana horonan-tsary.
Mikasika ny lohahevitry ny LibreOffice, dia manome ny ankamaroan'ny filàna fa tsy manana asa tena lehibe ho an'ny asan'ny olona sasany.
Nametraka izany i Manuel de la Fuente tamin'ny fanehoan-kevitra:
Mahamenatra fa misy olona eto amin'izao tontolo izao "zanak'ondry" toa an'io lehilahy io. Raha te hampiasa Mac ianao dia tsara izany, fa ny hampivelatra ny fomba fisainana toy izany dia ny fanekena ny tsenan'ny fiainana manjakazaka izay manjaka amintsika ary nahatonga an'izao tontolo izao ho toerana sarotra hipetrahana (tena miaina fa tsy manaraka ny omby). Mampidi-doza izany karazana fisainana izany satria miafara amin'ny fanamarinana ny tsy fisafidianana na inona na inona, na dia ny sakafo hohaninao aza, raha misy olon-kafa mampahazo aina kokoa anao sy misafidy ho anao. Ary toy izany koa, ny mpanao didy jadona dia mety hiafara amin'ny fanamarinana fa "marina izany, mametra ny fahalalahako izy io, saingy manakana ahy tsy handany fotoana amin'ny fifidianana."
Ah! Huxley sy Orwell dia marina tokoa, mampatahotra izany, amin'ny farany ny fiction ara-tsiansa dia feno faminaniana mahatsiravina foana. Mampihetsi-po tokoa ny mamaky ny Brave New World na 1984 toy ny famakiana gazety, ary mampihetsi-po ihany ny mahita ny Matrix na V toa ny fijerena vaovao, satria fantatrao, ary izany no ratsy indrindra, fantatrao, izany asehony anao izay tiany ho hitanao ary izay tian'izy ireo ho fantatrao fotsiny no ianaranao. Ary nisy namako nilaza tamiko indray mandeha hoe “tsy misy lehilahy, raha mbola tsy mamerina anay amin'ny andian-dahatsoratra izy ireo”, hoy ny navaliko “Oh tsia? avereno jerena ny atiny sy ny làlan'ny eritreritra ampianarina any an-tsekoly, amin'ny oniversite ary amin'ny fahitalavitra ary jereo raha tsy mamerina antsika am-pahatsorana izy ireo »
Novakiako koa io lahatsoratra io.
Eny, ny fihetsika izay lazain'i carcamal an'i nano dia ny fihetsika posera, ireo mpitia ny computing.
Ny eritreritro dia hoe na iza na iza mividy Mac dia pringao izay mividy azy io hahatsapa ho milay, na satria nisy olon-kafa nilaza taminy fa izy ireo no mpampiantrano ao amin'ny andininy (inona no nitranga tamiko).
Linux sy Mac dia mitovy.
Ny tantara iray hafa dia ny an'ny mpamorona sary, misy Mac tsara kokoa.
Tsy fantatro raha miteny ahy ho mpahay siansa momba ny solosaina ianao na inona no tianao holazaina, saingy tsy poser aho, noho ny zavatra nianarako tao amin'ny anjerimanontolo nandritra ny fotoana ela, mba hitazomana izany.
Tsy mihemotra amin'ny mac na windows aho, afaka ampiasaina amin'ny inona izy ireo, saingy miaro ny Linux aho satria afaka miasa mitovy amin'ny iray amin'izy ireo fa amin'ny tombony mamela anao ho tompon'ny rafitra fa tsy orinasa mega biby.
Ekeko fa ny Mac dia mety ho tsara kokoa amin'ny famolavolana, fa tsy satria MacOS dia rafitra ultra mega satria raha izany dia ny Linux dia satria mifototra amin'ny Unix isika, raha ny marina, misy ny tsaho milaza fa manana ampahany amin'ny Linux Kernel ao anaty i MacOS, fa ny ka nikatona tamin-kabibiana tsy ho fantatsika velively raha toa hadalana noforonina na zava-misy fotsiny ireny, ka mametra ny tenako hanana fisalasalana tsotra izao.
Ny teboka mihodina, ny rafitra rehetra dia misy firavaka satro-boninahitra, ary ny MacOS dia tsy tsara kokoa amin'ny famolavolana satria MacOS fotsiny, fa noho ny suite Adobe ary satria afaka mihambo farafaharatsiny manana fidirana akaiky miaraka amin'ireo fitaovana ampiasaina. Fa raha manana an'io kalitaon'ny fampidirana io ny Linux raha tsy mandoa amina miliara $$$ ianao dia hitovy amin'ny MacOS izany.
Tsy haiko raha azoko hazavaina amiko, fa eto izy ireo dia tia ilay resabe ... Mampiasa aho ary hampiasa Linux mandra-pahatongan'ny andro reraky ny fianako zavatra vaovao, ny fikandrana nataoko dia nanao ratsy be ahy tokoa noho ny hadisoana mahatsiravina ary mbola tsy afaka nanana Mac mihitsy aho satria tsy manana. toy ny helo mandoa ny antsasaky ny karamako isan-taona amin'ny iray amin'ireo (nanandrana ilay antsoina hoe Hackintosh aho, ary na dia tsara aza izany dia tsy tiako izany).
Na izany na tsy izany, hazavao tsara fa tsy miaro ny Linux ho rafitra tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra afaka manao ny zava-drehetra aho, miaro ny Linux ho rafitra mamela anao hanao izay tianao atao miaraka aminy ianao ary hitombo amin'ny maha-olona anao. Miaro azy amin'ny hevitra aho fa, na dia mitombina aza izy ireo hahazoana fizarana tsena lehibe kokoa, dia tsy mifanaraka amin'ny idealy rindrambaiko malalaka.
Oh ary raha hitan'izy ireo fa mampiasa windows aho izao dia satria miasa aho fa tsy amin'ny pc.
Tsia, ny poser informatika no mieritreritra an'io:
Nampiasa Linux aho satria nisy nahita izany tany
Oh eny, izany dia milaza tsy misy dikany ankavanana sy ankavia. Fa tongava, fa afaka mividy Mac izy ary tsara kokoa ny migadra miaraka amin'ny fampiononana rehetra ao amin'ny sela fa tsy afaka ary manao izay tianao, na dia mandany vola kely aza izany.
Fa gadra inona ???? Aleo tsy hiteny tsy misy dikany, angamba raha manana mac aho dia tsy ho afaka hilalao, hanoratra, hijery anime, hentai, hanoratra antontan-taratasy sns? Ny fonja dia mety ho tranomaizina ho an'ny mpamorona fa tsy ho an'ny mpampiasa, izay ambonin'ireo osx ireo dia mieritreritra aho fa afaka mihazakazaka mora foana ny rindranasa Linux.
Ny fonja dia mety ho fonja ho an'ny mpamorona fa tsy ho an'ny mpampiasa
fa eo ambonin'ireny osx ireny dia heveriko fa afaka mihazakazaka ny rindranasa Linux mora foana izy ireo.
X11 dia tsy toy izany koa
Heveriko fa ny tsirairay dia mampiasa ny rafitra mifanaraka amin'ny filany indrindra, raha x ny mpampiasa x hividianana Mac satria tiany kokoa izany, manan-jo hampiasa izany araka izay itiavany azy izy ireo, ary dia izay. Raha izaho manokana dia tsara kokoa amiko ny miasa miaraka amin'ny distro maimaim-poana toa an'i Trisquel, manana izay ilaiko fotsiny aho, saingy angamba ho an'ny olona iray dia tsy ampy izany, ary tsara ny mitady fomba hafa mahafapo azy ireo.
Ny ambiny dia fanajana, arahaba.
Te-haneho hevitra momba izany aho mandritra ny andro vitsivitsy izao, ...... fa ny linux mystical an'ny "linux tsy manana virus" dia nopotehin'ny android, ankehitriny fa ny linux system dia ampiasain'ny olona an-tapitrisany, (android is a linux) miseho isan'andro ny viriosy. malware, trozona, sns. Izay mitarika ny fehin-kevitra fa talohan'ny tsy nisy viriosy tao amin'ny Linux, satria tsy nisy nampiasa azy io (ara-dalàna) ary noho izany dia tsinontsinona ny mpijirika hamokatra azy ireo, Miaraka amin'ireo finday an-tapitrisany amin'ny Linux (Android), dia aseho fa ny Linux dia marefo kokoa noho ny windows sy apple,… .. angano tsy dia marina iray!
Hmm raha ny marina dia tsy linux amin'ny ankapobeny ny android ary misy lahatsoratra ara-teknika izay manazava ny antony mahatonga ilay "angano" milaza fa tsy manana viriosy marobe ny GNU / Linux.
Ilay mpamorona iray ihany dia manazava fa nanandrana namorona viriosy ny tenany, nahalala ny fahalemen'ny rafitra, ary zara raha mahavita mihazakazaka (manome tanana azy ireo alalana) ka zavatra tsy tokony hikasihantsika izany, lalina loatra izany na izaho aza tsy azoko amin'ny ankapobeny.
Ilay mpamorona iray ihany dia manazava fa nanandrana namorona virus izy tenany, nahalala ny fahalemen'ny rafitra, ary zara raha mahavita mihazakazaka (manome alalana azy io amin'ny tanana)
Tsy ilaina intsony ny milaza bebe kokoa, izany dia manaporofo fa hisy, raha misy ny fahalianana ary nomena ny mety.
Diniho ny fomba hahatongavan'ny viriosy any Windows. Ny mpampiasa dia mandray rindranasa kasainy hotratrarina, hosedraina ary hampiasaina, saingy voan'io aretina io, mazava ho azy fa tsy fantany. Amin'ny Linux dia mila manome alalana azy ianao? Eny, hanome azy ireo izany ary raha voany izany, inona no mitranga. Ilay mpampiasa izay misintona na inona na inona hampandeha azy amin'ny Windows dia hanao izany amin'ny Linux (raha samy ao amin'ny Linux ny application / ny mpampiasa). Raha tsy maintsy omenao "permissions" amin'ny tsindry roa na miaraka amin'ny sudo izany.
Araka ny efa nolazain'izy ireo taminao, https://blog.desdelinux.net/virus-en-gnulinux-realidad-o-mito/ Izy dia afaka mamaly anao amin'ny fomba tsara kokoa noho isika rehetra… Tsy angano io fa zava-misy.
Ahoana no nanononan'izy ireo ahy? Fa tonga fotsiny aho.
Mba tsy hamboamboarina, fa toa hitako fa misy lesoka tsara ity lahatsoratra ity. Efa tara loatra angamba raha hamaky bebe kokoa ary hamaly an'izay sy izay dia hataoko amin'ny manaraka.
Manontany tena aho raha hanao fanazavana amin'ny antsipiriany sa hiala amin'ny ankapobeny.
Tamin'ny farany dia nisafidy ny antsipiriany aho ary na dia vitako aza dia tsapako fa lahatsoratra kely io be loatra lava loatra hanararaotana ny bilaogy.
Soa ihany fa mieritreritra aho fa tsy ilaina ny baomba be loatra, satria ny tenako valiny teo aloha Izy io dia efa miditra amin'ny sehatry ny azo atao araka ny ekena ary voalaza ao amin'io lahatsoratra io ihany sy izay ilazanao ny tenanao, ary miditra amin'ny sehatry ny otrikaretina otrikaretina mahazatra ihany koa, ka ny vesatry ny porofo dia any an-tsaha hafa, tsy any amiko. Tsy azo atao izany, tsy nisy izany satria tsy nisy zanabola na fotoana (na ho an'ny famatsiana virus na ny fangatahana fangatahana voan'ny aretina).
Fa maninona no omen'ny mpampiasa alalana na mifindra mivantana amin'ny faka hampandeha azy io? satria nakarina hampandeha azy io, tsy misy hafa, ny antony iray anaovana kopia azy ary mihazakazaka ao amin'ny Windows.
Android dia tsy linux, fa ho an'ny vao manomboka, ary ny faharoa dia manoro hevitra anao aho hamaky ity lahatsoratra ity Virosy ao amin'ny GNU / Linux: Zava-misy sa angano? tena mahaliana anao ny mahita an'io
mba ho hitanao izany
Errata, linux tsy manana virus ”dia nopotehin'ny android, ankehitriny fa ny rafitra linux ampiasain'ny olona an-tapitrisany, (linux no android) dia miseho isan'andro ny viriosy. malware, trozona, sns.
Mikasika an'io paradigma io izay ny Linux dia natao ho an'ny "hackers", "geeks", "neerds", sns, tokony holazaiko fa paradigma vita (natao tany Etazonia) io. Tamin'ny taona 80 tany ho any, rehefa niady ho an'ny tsenan'ny rafitra fikirakirana mpampiasa farany i Steve Jobs sy Bill Gates, dia nanomboka namorona filozofia vaovao momba ny teny hoe "mpampiasa farany." Ny marina, rehefa miresaka momba ny haitao fampahalalana isika dia miresaka zavatra vao haingana teo amin'ny lafiny tantara. "Zara raha" 60 taona isika hatramin'ny nanombohan'ny electronics nanova lalina ny fiainantsika, ary "zara raha" 30 taona hatramin'ny nidiran'ny solosaina manokana tamin'ny fiainantsika. Amin'ny fivoaran'ny Mac OS sy Windows, ny Jobs sy ny Gates dia nifanindry teo amin'ny famolavolana ny lozisialy ho an'ny mpampiasa manokana, mpampiasa iray moana, vendrana, kamo ary azo ampiharina, ary inona hatrizay dia heverina ho "mpampiasa farany". Tsy fandinihana teny an-tsena akory izany, mba hividianana tsena tsara kokoa ny zavatra novokarin'izy ireo, hialana amin'ny fanontaniana ary "fiasa fotsiny". Ny olona rehetra dia samy manana ny fahaizany sy ny fahaizany mianatra zavatra vaovao, fa ny tena zava-dehibe dia manana fahaizana mianatra isika vahoaka. Ny mpampiasa farany Jobs and Gates dia maodely mpampiasa novolavolaina izay tsy tena maneho ny salan'isa mpampiasa tamin'izany fotoana izany. Ny zava-misy fa ny olona iray tokony hampiasa fitaovana vaovao sy be pitsiny tanteraka toy ny solosaina, izay mitovy habe amin'ny birao iray manontolo, dia voatery hidika fa misy fiolahana mianatra amin'ny asany. Ny olona "fiafarana" dia nolavina tamim-pitandremana fandrisihana hianatra momba ny siansa informatika. Ohatra, misy olona mahita fa mora ny mianatra mifehy telefaona finday vaovao, raha sarotra ho an'ny olon-kafa kosa izany, na eo aza izany, ny olona manam-pahalalana dia tsy mahalala afa-tsy izay navela, dia hianatra bebe kokoa izy ireo raha ilay fitaovana izay tantanin'izy ireo dia tsy nanana "fetra" amin'ny fidirana amin'ireo singa sy rafitr'izy ireo. Any Failandy, any amin'ny sekoly maro, ny lohahevitra momba ny siansa momba ny solosaina dia manana singa ampianarina ny ankizy hanao programa, raha tany Kolombia kosa dia nilaza fa zara raha mahatakatra ny fomba fitantanana Word, Power Point ary Paint amin'ny Windows ny lohahevitra; Raha jerena izany, ahoana araka ny eritreritrao ny fampitahana ny làlan'ny fianaran'ireto ankizy ireto rehefa tonga amin'ny dingana lehibe izy ireo? Izany no antony ny rafitra miasa toa ny Windows sy Mac, fa tsy ny vokatra izay manatanteraka asa manokana dia vokatra mampigadra fahalalana, ary eo no mipoitra ny hevitra fototra, FREEDOMA. Izany no antony ankasitrahako fa misy olona toa an'i Richard Stallman, Linus Torvalds ary maro hafa izay nampiroborobo ny fahalalahana noho ny fahalalana.
Ny fanajana, ny tehaka ary ny arahaba arahaba… marina ny zavatra lazainao.
Any Venezoela dia misy toa izany koa ny fanabeazana amin'ny solosaina, izay raha ny tena izy dia tokony ho automatisation an'ny birao.
Tamin'izany fotoana izany, manodidina ny taona 2002, vao nanomboka nikasika an'ity tontolon'ny hack sy misintona zavatra an-tserasera ity aho, tadidiko fa nisy vondrona namana tamin'izany fotoana izany (androany isika rehetra mianatra siansa momba ny solosaina) dia nanangona vola hividianana magazine hacking, Linux ary nandefa fampahalalana foana izahay avy tamin'ny mpamily penina 128mb xD mahery.
Tamin'io fotoana nahafinaritra io, izay nidiranay tamin'ny fampirimana manokana an'ny mpampianatra tao amin'ny tambajotra teo an-toerana hanovana naoty na hamafana ireo asa nanesoesoinay "an'i nerd" izay nahatonga anay te hahafantatra bebe kokoa, hihinana boky, hiaina zava-baovao ... Androany ny iray amin'izy ireo dia mampiasa Windows satria tiany ny milalao, saingy fantany fa tsy afaka manao betsaka araka izay azontsika atao amin'ny haavon'ny rafitra izy ary mahatadidy amin'ny nostalgia rehefa nandany fotoana tsy nihena intsony izahay efatra ary tsy latsaky ny 3 andro niadiana tamin'ny Fedora core 4 xD
Tsy hiresaka momba ny fanasokajiana tsy ara-drariny sy mampalahelo ataony amin'ny ankapobeny akory aho, izay mazava ho azy fa diso, satria azo lazaina ihany koa fa ny Windows dia miasa (izay izy koa), ny Linux dia natao "milalao" ary mandany fotoana, izay Mac aza tsy tsara akory hiasa fotsiny mba hisehosehoana sy hamoizam-bola; Sns Miala amin'izany.
GNU / Linux dia azo antoka fa tsy natao ho an'ny rehetra, na amin'ny fomba fijery ara-potokevitra na amin'ny fomba fijery miasa.
Ary marina fa marina amin'izao fotoana izao fa raha misy mila fampiasana sasany (matihanina na tsia) dia tsy manan-tsafidy izy ireo fa hiova amin'ny sehatra hafa, na farafaharatsiny halaim-panahy izy ireo.
Na izany aza, ny tsy vitan'ny tohan-keviny dia ny fampiakarana ny dichotomy "Freedom vs. Functionality", na hametraka fomba hafa; io kalitao, matihanina ary fampiasa io dia mifanipaka amin'ny Freedom ary ny Freedom no omena tsiny noho ny tsy fisianao ireo zavatra ireo.
Tsia. Raha marina fa maro ny zavatra ilain'ny GNU / Linux dia tsy manana ireo zavatra voalaza etsy ambony ireo, dia tsy noho ny Freedom, fa diso tanteraka ny fanaovana an'io fikambanana io, tsy mitombina izany ary tsy maharitra ihany koa.
Ny antony tsy fisian'ireto zavatra ireto dia maro ary miaraka amin'izay koa ny fanabeazana fototra. Na dia tsy te hanaiky izany aza ianao, ny GNU / Linux dia rafitra iray izay mbola maitso ary mivoatra hatrany farafaharatsiny ho an'ireo faritra ireo (ireo mpamily lehibe indrindra an'ny "Linux" dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny faritra mpizara satria izany no orinasany ary toa manana izy ireo nahatratra ny iraka nampanaovina azy ary ireo izay niditra tao amin'ny faritry ny "mpampiasa farany", mihoatra ny fehezanteny, dia antsasaky ny iray monja).
Toy izany koa, ny vahaolana dia tsy "hiditra amin'ny distro tokana", satria voalohany tsy ny olona rehetra no mitovy tombontsoa ary heveriko fa efa naseho etsy ambony, faharoa, inona no mahatonga anao hieritreritra fa ny vahaolana dia ao amin'ny "union"? Samy manana ny ankamantatra ny vahaolana ve ny tsirairay? Tsy misy dikany izany. Mba hanomezana ohatra iray dia naka kernel BSD i Apple ary avy teo dia azon'izy ireo ny rafitr'izy ireo, izany hoe miharihary fa ekipa olona iray ihany no mahalala izay tadiaviny sy manao azy io. Ny fiantsoana ny "hanatevin-daharana ny distros rehetra" dia ny wildcard mahazatra sy ny valiny mahamenatra ho an'ireo tranga ireo ary mieritreritra aho fa tsy mampiseho afa-tsy ny fahaverezantsika isika, raha tsy fantatra ny olana dia tsy azo atao ny vahaolana.
Ny lafiny ratsy iray hafa manoloana ny "firaisan'ny distros" dia ny fampiraisana ny tenantsika amin'ny distro iza, amin'ny Ubuntu? (hanome ohatra) nahoana isika no tsy maintsy manambatra hery hampatavy ny vokatry ny mpandraharaha iray raha tsy takalo na inona na inona?, marina tokoa Aleoko miasa Microsoft manatsara ny Windows toy izay maditra amin'ny mpandraharaha "Linux" amin'ireny teny ireny Ary milaza aho fa aleoko izany satria farafaharatsiny izany toe-javatra izany dia ho bebe kokoa marina, hampivelatra ny vokatra ny orinasa ary handoa ny mpiasa hanao izany, raha ny tranga faharoa dia ho an'ny cookie ideolojika izay "noho ny rafitray io" ary ny marina dia tsy izy. Ary hiaraka aminay amin'ny Debian? (hanome ohatra iray hafa) inona no mety hahatonga azy ireo hieritreritra fa handao ny hetahetany ireo mpandraharaha hafa ary indraindray dia hiasa an-tsakany sy an-davany mba hahasoa ny vondrom-piarahamonina? izay fahasoavana rehetra hanao izany ary hanao toa ny Microsoft sy Mac izy ireo, manangana ny rafitr'izy ireo mihidy (raha azony atao mazava ho azy).
Antony iray hafa ny kilasika, Freedom manova sy mizara, tsy novaina ary mizara, dia hadalana. Ny "Unity" dia manohitra tsotra izao ny Free Software ary hanao ny Fahafahany ho taratasy maty.
Ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity koa dia diso amin'ny valinteniny fa heveriko fa efa 3ndriago Nolazainy avokoa izay nolazainy
Manampy fotsiny aho fa ny Windows dia tsy mitovy hevitra amin'ny Virus sy ny Screens Blue, milaza fa mitovy amin'ny filazàna fa ny Linux dia mitovy hevitra amin'ny fanoratana famantarana eo amin'ny console mba hanao zavatra izay hataon'ny olon-kafa amin'ny tsindry iray, fa satria geeks tsy manana sipa izy ireo ary tsy manana fiainana dia tian'izy ireo izany ary tsy manelingelina azy ireo izany. Ilay mihinana viriosy ao amin'ny Windows dia satria tsy fantany izay ataony, raha tsy mitranga any an-toeran-kafa izany dia satria samy mianatra ho tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ilay fanovana izy na satria tsy mitovy ny risika misy azy. Ary amin'ireo efijery manga, manana Kernels Panics ihany koa ny Linux, tsy mivoaka isan'andro ve izy ireo? Ao amin'ny Windows, tsy voalaza koa ny marina.
ankehitriny, Avelao ny fahalalahana hanohana ny "vokatra tsara kokoa"?. Ny zavatra ataon'ity lohahevitra ity sy izay lazain'ny lohatenin'ny lahatsoratra dia zavatra iray, amin'ny lafiny lehibe na kely kokoa, ny ankamaroan'ny linuxeros sy ny ankamaroan'ny distros dia manao; Betsaka ny lalan-drà izay miala amin'ny fahalalahany "malalany" amin'ny "vokatra tsara kokoa", izay anoloran'izy ireo izany ary manamarina izany hetsika izany aza.
Mazava ho azy, raha ny hitsambikina amin'ny MacOSX na Windows dia heverina ho tsy ekena, ny fenitra roa sosona no ampandehanana ary hipoaka ny hatezerana, satria ekena ny "switch" raha mbola tsy mikasika ny penguin; ny ady tsy mahay mandanjalanja dia tena Linux, na dia ampiasaina hamboarina aza fa "mankany amin'ny Fahafahana."
Firy eto no tena tsy mahafoy ny Freedom ho an'ny "vokatra tsara kokoa"?.
Eto misy olona manoratra avy amin'ny distro Free.
Tsy manana olana amin'ireo manao an'io "fahafoizan-tena" io aho ary manaiky azy io, saingy azoko atao izany amin'ireo izay mahita mololo eo imason'ny olon-kafa fa tsy amin'ny azy manokana.
Ny fahalalahana tanteraka dia misy ifandraisany, na ianao aza dia manome azy io hahatakatra izay lazainao, fa ny filazanao fa ilaina ny mahafoy fahalalahana ho an'ny serivisy na vokatra tsara fotsiny ary ny fitenenana azy amin'ny fomba ankapobeny no tena nanohina ahy indrindra.
Ny olon-drehetra dia afaka (ary tsy sasatra miteny azy aho, mamita ny fahatakaran-javatra) manao izay tiany amin'ny fiainany ary mampiasa izay tena tadiaviny. Nandalo distros maromaro aho, nanomboka tamin'ny maimaim-poana ka hatramin'ny ampahany malalaka ... Raha ny tena izy, efa nampiasa ny Fedora Core aza aho taloha (izay tamin'izany fotoana izany dia malalaka kokoa noho ny disto maro ankehitriny).
Raha ny marina dia mampiasa vokatra an-tsokosoko maromaro aho, saingy ny fahafantarana azy ireo sy ny fomba tokony hifandraisako amin'izy ireo mba hampihenana ireo vokatra manimba mety haterak'izy ireo. Mampalahelo fa mitaky izany amiko ny asako, saingy farafaharatsiny ao an-tsaiko fa afaka manao izay tiako atao amin'ny rafitro aho, satria fotsiny izy mamela izany ary izany no tsy fitovizan'ny mpampiasa mahazatra izay tsy miraharaha ireo hevitra sy fampiasana rehetra ireo. rafitra hafa manohitra ny maro izay lazainay eto, fa fantatsika hoe inona ny fahalalahana ao anatin'ny rindrambaiko ary fantatsika ihany koa ny zavatra hajainay raha toa ka mampiasa rindrambaiko manana.
Ny fahitana mololo eo imason'ny olon-kafa dia tsy zavatra ataoko, fa, tsy hanaiky na inona na inona aho ary hataoko tamin'i Richard Stallman. Saingy eto ry zareo dia tia, araka ny nolazaiko, ny mametraka resabe kokoa amin'ny zavatra ary matetika hirehareha amin'ny fanehoan-kevitra "lalina".
Billet na aiza na aiza xD
Ny "fahalalahana tanteraka" dia azo lazaina ho miankina amin'ny fomba fijery sy filozofia noresahina ary tamim-pahatsorana noho ny fahalianana te hahafantatra sy ny fomba ofisialy tiako ho fantatra amin'ny fomba "tiako holazaina" satria heveriko fa tsy tonga tany amin'ireo rano ireo aho.
Ankehitriny momba ilay lohahevitra, dia ekeko tokoa fa ny lesoka nataonao dia ny milaza fa ny kalitao sns sns dia sarobidy kokoa noho ny fahalalahana; ary mbola ratsy kokoa aza ny milaza fa ny roa tonta dia mifanipaka ary tsy miankina irery (ity farany tsy azoko antoka raha tena nolazainy izany satria mbola tsy vitako ny namaky ilay lahatsoratra voalohany).
Samy niresaka ireo zavatra roa ireo aho ary satria ny faharoa dia tsy misy resaka fa handeha ho any amin'ny voalohany aho.
Ny lazaiko dia ilay teboka voalohany misy triatra fitafiana be dia be eo amin'ny tontolon'ny Linux, ny fahafoizan-tena ho an'ny "fahalalahana ho an'ny kalitao" dia zavatra saika ataon'ny mpampiasa Linux rehetra ary saika ny distro rehetra isan'andro ny fiainany ary rehefa ataony izany dia manamarina izany hatrany izy ireo. Ny pitsopitsony dia any amin'ny sasany izay sahirana mahita eo akaikin'izy ireo fa nisy nanao safidy hafa, tonga ny fahatezerana ary mihiaka izy ireo ETOJE !!!.
Ho ahy, ny UNDER NO CONCEPT dia kalitao kokoa noho ny fahalalahana. Ho ahy, ilay misafidy Mac fa tsy Linux Distro dia mitovy amin'ilay misafidy mpamily tompony fa tsy ilay maimaim-poana, manana (araka ny) sary mihetsika maromaro na ireo misafidy browser tsy maimaim-poana alohan'ny iray maimaim-poana fotsiny satria tian'izy ireo kokoa ny sary famantarana.
Mazava ho azy, tsy mandehandeha tezitra aho na manondro an'iza ho heretika na iza na iza fa hitako tsara fa mitovy daholo izy ireo, raha ny resaka an-tsokosoko izay manamarina ny safidiny manokana no hitenenany "amin'ny ankapobeny fomba "fa ilaina ny mahafoy zavatra" fahalalahana ho an'ny kalitao. Ao amin'ireny rano ireny dia saika misy ny zavatra eken'ny mpampiasa Linux, ny toa tsy ekena dia ny fanovana ny penguin ho zavatra hafa.
Ny tiana hambara dia ho an'ny sasany (izay ampidiriko ny tenako), ireo izay manova ny penguin ho an'ny Mac na Windows dia tsy latsa-danja noho ny misafidy mpamily fananana na rindranasa (na kernel) misy blobs, sns.
Mbola averiko ihany, ho ahy dia mitovy izy ireo ... mandra-pahatongan'ny andro hijeren'izy ireo ny mololo amin'ny mason'ny olon-kafa manana zavatra ao aminy, izay zavatra tsy nampoizina fa tsy ny olon-drehetra (na dia kely indrindra sy kely vava aza izy ireo) ary ho ahy dia vao mainka aza mangoraka kokoa izy ireo satria tsy manota amin'ny maha-moralista pseudo-moralista azy ireo.
Tsy te hanao an'io resaka manokana io aho, fa raha manontany anao aho hoe maninona ianao no tsy mampiasa distro maimaimpoana ary maninona no tsy mampiasa navigateur maimaimpoana dia hohamarininao amiko tsy mitovy amin'ny fomba anaovana an'io lohahevitra io nanamarina ny fanovana sy ny safidiny.
PS: Tsy dia azoko tsara ny filazanao an'i Stallman. Raha ny fahitako azy dia tsy tadidiko ny fahitako an'i Stallman nanondro mololo tamin'ny hafa (mitsikera ireo mpamorona rindrambaiko tompona trano sy ireo izay mitady hampifamatotra ny hafa aminy izy, saingy tsy mitsara olona izy raha tsy manontany azy izy ireo), na dia nanao aza izy farafaharatsiny dia iray amin'ireo vitsy tsy manana rantsana na mololo ho an'ny tenany, izay niantso azy hoe Taliban, adala, eccentric ary zavatra hafa.
Raha ny tokony ho izy, ilay lahatsoratra tany am-boalohany (izay hitako somary tara kely), ny heviny dia tsy nampiakarina mafy, na dia mbola mahatonga ny hadisoana amin'ny fisainana Fahalalahana aza = ny antony mahatonga ny faharatsiana. Ny antony mahatonga ny zava-dratsy dia iray hafa ary ny ohatra tsara indrindra dia ny mifanohitra amin'izay, ny MacOSX. Ny fahalalahana dia tsy manakana na iza na iza haka izay tiany ary hanao zavatra "tsara, kalitao, matihanina sns", ny olana dia "tsy misy iray" (na roa, sns) izay manao izany. Miaraka amin'ny BSD i Apple.
Izao ny tiana hambara: tsara ny fahalalahana misafidy OS, saingy raha te hanana fahalalahana hisafidy ianao dia tsy maintsy notsapaina ny safidy rehetra. Ho an'ny olona handao ny fahafahany, dia mila manao izany avy amin'ny fahalalana izy ireo, ary raha ny iray amin'ireo safidy fotsiny no nampiasanao ho an'ny asanao mahazatra dia tsy manana izany fahalalana izany ianao.
Miresaka an'io rakitra io (windows, mac, freebsd, linux) mifidy linux aho.
Manana fanontaniana iray fotsiny aho ... Ahoana ny fomba ampiasanao safari amin'ny Android? Misy eo amin'ny tsena ve io browser io? LOL XD
Tsy izany fa indraindray diso ny UserAgent. Nametraka ahy eo amin'ny sakana aza i Safari ...
Rehefa mametraka Opera ianao dia efa esorina
Mozilla / 5.0 (Linux; U; Android 0.5; en-us) AppleWebKit / 522 + (KHTML, toy ny Gecko) Safari / 419.3 - izany no antony nanekena azy ho Safari ao anatin'ny Android
Izay mihevitra toy izany dia tsy mendrika izany. Izay tsy ampiasainy, fa misy olona ampy hahalala ny fankasitrahana azy.
Salama mpiray tanindrazana, avy any Venezoelà koa aho. Amin'izao fotoana izao aho dia nahazo vista sy canaima 3.0 tamin'ny laotop, ary raha ilay voalohany nilalao jrjéjeje ary koa nanao antontan-taratasy satria ny toerana iasako dia mampiasa windows hatrany izy ireo.
Tiako ny canaima na dia mazava ho azy aza misy lesoka be dia be saingy tsy dia matotra izy ireo ary ny mpampiasa tsotra dia mora mianatra mampiasa azy io, ny linux voalohany nataoko dia kubúntu tany amin'ny oniversite dia mieritreritra aho fa misy 6 sy zavatra iray, ary niadana izy io ary nokaoka ny birao misokatra, saingy nahasarika ahy ihany ratsy loatra ny ati-ko tsy nifanaraka tamin'ny kde,
Ny hevitro dia ny mac dia ho an'ireo izay tsy mampaninona ny mandany tena, mandresy ho an'ireo izay tsy mahalala firy sy mividy raha matoky izy ireo, ary linux ho an'ny hafa.
Fantatro fa maro no tsy miraharaha raha maimaimpoana na tsia ny Linux (omeko ny GNU) koa, raha misokatra na tsia, ary tsara, tsy afaka mitsikera olona aho, samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay, ny zavatra tsara dia misy fidirana bilaogy toy ireo izay manazava ny tombony azo amin'ny linux sy ny hevitry ny maro.
Mampiasa Linux aho hiasa mandritra ny 2 taona mahery, mampiasa Mac ny olon-drehetra eto ary manao zavatra mitovy na mihoatra noho izy ireo aho (tsara, mampiasa SysAdmin koa ny Linux)
Ao an-trano dia mampiasa Linux mandritra ny 4 taona mahery kely aho (ao anaty masinina virtoaly fotsiny i Windows mba hilalaovana lalao sasany izay mitaky ny lampihazo sy ny fidirana manodidina)
Talohan'ny fotoana nananako fotoana bebe kokoa dia nanandrana distro maromaro aho, niaraka tamin'ny Arch nandritra ny fotoana kelikely aza aho izao, ankehitriny dia mila mamokatra, manam-potoana ho ahy, efa vonona sy vita daholo hampiasaina ary satria tsy izany no antony hialako amin'ny Linux. , Mahazo tsotra aho hametraka distro, izay tsy mitaky fikirakirana sarotra sy izay rehetra ilaiko, na Debian, Linux Mint na Ubuntu ary dia izay.
Ny fahalalahana misafidy amin'ireo safidy sy fitambarana marobe hitako tao amin'ny Linux ihany ary tsy hiova aho, raha nankany amina asa hafa aho ary takian'izy ireo hiara-miasa amin'ny rafitra fiasa hafa aho, dia hametraka linux amin'ny milina virtoaly aho ary hiasa araka izay tratra avy eo.
Google Chrome tonga amin'ny Android
Momba an'i Fedora sy ny fiovana mety hitranga amin'ny Roll-relase